ApannPyay Media - Page 382 of 392 - News and Media
ဦးသန်းရွှေ အပါအဝင် စစ်အသိုင်းအဝိုင်း၏ ယတြာရုပ်ပွားတော်များဖယ်ရှား
July 7, 2020 by ApannPyay Media
ဦးသန်းရွှေ အပါအဝင် စစ်အသိုင်းအဝိုင်း၏ ယတြာ ရုပ်ပွားတော်များဖယ်ရှား၊ စီးပွားဥစ္စာအာဏာ ရစေရန် အစီအမံ ပြုလုပ်ပေးသည့် ရဟန်းကို ဝန်ခံလက်မှတ်ထိုးခိုင်း ရန်ကုန်၊ ဇူလိုင် ၇ နေပြည်တော်၊ ပျဉ်းမနားမြို့၊ ရွာကောက်ရပ်ကွက်၊ ပန်းခင်း ၃ နယ်မြေ၊ စိန္တာမုနိကျောင်း၊ စိန္တာမုနိမင်းဝံတောင်ဘုရားပရိဝုဏ်အတွင်းရှိ ကြည်ညိုဖွယ်မဆောင်သည့် ရုပ်ပွားဆင်းတုတော် ၇၇ ဆူကို ဖယ်ရှားလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း သာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနက သတင်းထုတ်ပြန်သည်။ အဆိုပါရုပ်ပွားတော်များသည် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးဟောင်း ဦးသန်းရွှေ မိသားစုအပါအဝင် စစ်တပ်အသိုင်းအဝိုင်းများ လှူဒါန်းထားသည့် ရုပ်ပွားတော်နှင့်စေတီပုံစံတူများဖြစ်ပြီး အခြားအရပ်သား လာရောက်လှူဒါန်းမှုများလည်းပါဝင်သည်။ ယင်းစိန္တာမုနိမင်းဝံတောင်ဘုရားပရိဝုဏ်အတွင်းရှိ ရုပ်ပွားတော် ၇၇ ဆူသည် ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာနှင့်ကိုက်ညီမှုမရှိခြင်း၊ လောကီအကျိုးစီးပွားအတွက် ဗေဒင်ယတြာအစီအမံများနှင့် ပေါင်းစပ်ပြုလုပ်ထားခြင်း၊ အခြားဘာသာ အယူဝါဒများ လွှမ်းမိုးရောယှက်နေခြင်း၊ ကြည်ညိုဖွယ်ဆောင်ခြင်း၊ မြင်ရသူတို့၏ ကြည်ညိုစိတ်ကို ထိခိုက်စေခြင်းကြောင့် မြတ်စွာဘုရားရှင် ၄၅ … Read more
အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါကြောင့် ဇင်းကျိုက်ရေတံခွန် အပန်းဖြေစခန်းကို ယာယီပိတ်သိမ်းထားတဲ့အတွက် လာရောက်လည်ပတ်တာတွေ မပြုလုပ်ကြဖို့ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့ အမှုဆောင်အရာ ဦးထွန်းထွန်းဦးက တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ ကိုဗစ်-၁၉ ကြောင့် ပိတ်သိမ်းထားပေမဲ့ လက်ရှိမှာ တနေ့ လူ ၁၀၀ ဝန်းကျင်နဲ့ ရုံးပိတ်ရက်တွေမှာ ၅၀၀ လောက် လာရောက်နေတာကြောင့် မလာရောက်ဖို့ အခုလို လိုက်တာလို့ ဆိုပါတယ်။ ဇင်းကျိုက်မြို့၊ ဖလပ်ရပ်ကွက်ရှိ ကျောက်သင်္ဘောရေတံခွန်အပန်းဖြေစခန်းဟာ မွန်ပြည်နယ် အတွင်း ထင်ရှားတဲ့ရေတံခွန်တစ်ခုဖြစ်ပြီး နှစ်စဉ်ဝါဆိုလ အဖိတ်နေ့ကစပြီး သီတင်းကျွတ် လပြည့်နေ့အထိ လာရောက်လည်ပတ်သူတွေနဲ့ စည်ကားခဲ့ပါတယ်။ အခုနှစ်မှာ ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါကြောင့် လူစုလူဝေးမဖြစ်စေဖို့ ခေတ္တယာယီပိတ်သိမ်း ထားတာကြောင့် စီးပွားရေးအရ ဆုံးရှုံးနေတယ်လို့ ရေတံခွန်လုပ်ငန်း လေလံအောင်မြင်ထားတဲ့ လုပ်ငန်းရှင် ဦးဇော်ဝင်းနိုင်က ပြောပါတယ်။ ပေါင်မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့က ၂၀၁၉-၂၀ … Read more
ချင်းတွင်း ဧရာဝတီ မြစ်ရေကြီးနိုင် Heavy to very heavy rainfill alarm. ၂၀၂၀ ဇူလိုင်လအတွင်း စစ်ကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းနှင့် ကချင်ပြည်နယ်တို့တွင် မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းနိုင်ပြီး ရေကြီးရေလျှံမှု နှစ်ကြိမ်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ် သဖန်းဆိပ်ဆည်အထက်ပိုင်းလည်းမိုးကြီးနိုင်ပြီး ဆည်ရေဖြည့်မိုးများစွာရွာသွန်းနိုင်ပါတယ် စစ်ကိုင်းတိုင်း ကချင်ပြည်နယ်ဒေသတွင်းရှိိ ဧရာဝတီ ချင်းတွင်းမြစ်နှင့် ဆက်စပ်စီးဝင်သော မြစ်ချောင်းများရဲ့ နံဘေးနေသူများ မြေနိမ့်ဒေသတွေမှာ နေထိုင်ကြသူများ ရေဘေးအန္တရာယ်ရှိသဖြင့် အထူးသတိထားကြိုတင်ပြင်ဆင်ကြဖို့ လိုအပ်ပါတယ် တောင်ခါးပန်နှင့်း တောင်ခြေနေကြသူများ မိုးကြီးမြေပြို အန္တရာယ်ရှိပါတယ် #ဘေးအန္တရာယ်ကင်းကြပါစေ ၂၀၂၀ ဇူလိုင္လအတြင္း စစ္ကိုင္းတိုင္းအထက္ပိုင္းႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တို႔တြင္ မိုးသည္းထန္စြာ ႐ြာသြန္းနိုင္ၿပီး ေရႀကီးေရလွ်ံမႈ ႏွစ္ႀကိမ္ျဖစ္ေပၚနိုင္ပါတယ္ သဖန္းဆိပ္ဆည္အထက္ပိုင္းလည္းမိုးႀကီးနိုင္ၿပီး ဆည္ေရျဖည့္မိုးမ်ားစြာ႐ြာသြန္းနိုင္ပါတယ္ စစ္ကိုင္းတိုင္း ကခ်င္ျပည္နယ္ေဒသတြင္းရွိိ ဧရာဝတီ ခ်င္းတြင္းျမစ္ႏွင့္ ဆက္စပ္စီးဝင္ေသာ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားရဲ႕ နံေဘးေနသူမ်ား ေျမနိမ့္ေဒသေတြမွာ ေနထိုင္ၾကသူမ်ား … Read more
မြန်မာနိုင်ငံရှိ မြို့ပေါင်း ၁၃ ခုကို ကန္တာရကျိုင်းကောင်များ ဝင်ရောက်နိုင်သော စောင့်ကြည့်နေရာများအဖြစ်သတ်မှတ်
မြန်မာနိုင်ငံရှိ မြို့ပေါင်း ၁၃ ခုကို ကန္တာရကျိုင်းကောင်များ ဖြတ်သန်းဝင်ရောက်နိုင်သော စောင့်ကြည့်နေရာများအဖြစ်သတ်မှတ် မြန်မာနိုင်ငံရှိ တိုင်းဒေသကြီး နှင့် ပြည်နယ်လေးခုရှိမြို့ ၁၃ ခု ကို ဖျက်အားပြင်း ကန္တာရကျိုင်းကောင် (နှံကောင်) များဖြတ်သန်းဝင်ရောက် နိုင်သော အန္တရာယ်ရှိ စောင့်ကြည့်နေရာများအဖြစ် သတ်မှတ်ထား ကြောင်း စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနကသိရသည်။ အဆိုပါ ကန္တာရကျိုင်းကောင်များဖြတ်သန်းဝင်ရောက်နိုင်သော နေရာများ မှာ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတွင် လေရှီး ၊ဟုမ္မလင်း၊ တမူးနှင့် ကချင်ပြည်နယ် တွင် ပူတာအို၊ မချမ်းဘော ဒေသဖြစ်ကာ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ဘူး သီးတောင်၊ မောင်တော၊ ရသေ့တောင် ၊စစ်တွေ၊ ကျောက်ဖြူ နှင့် ချင်းပြည်နယ်တွင် တွန်းဇံ၊ ထန်တလန်၊ ပလက်ဝ အစရှိသော နေရာများကို သတ်မှတ် ထားကြောင်းသိရသည်။ ကျိုင်းကောင်အုပ်စုများသည် … Read more
သေမင်းနဲ့အတူ မနက်စာစာခြင်း (ဘဝအတွက် အရမ်းတန်ဖိုးရှိတဲ့ စာလေးပါ)
ဟာ..ခင်ဗျား သေ မင်း မဟုတ်လား.. လာထိုင်….ဗျာ.. လက်ဖက်ရည်လေး ဘာလေး သောက်ပါဦး မင်းက ငါ့ကို သေမင်းမှန်း ဘယ်လို သိတုန်း ဟာ ခများ ဟာ အတော်သိသာနေတာကြီးကို စာအုပ်ကြီး တစ်အုပ်နဲ့ ဘေးလွယ်အိပ်ကြီး လွယ်လို့ လူတွေကို တစ်မေ့တစ်မော လိုက်ကြည့်နေတာ ခများ လူတစ်ယောက်ကို သေသေချာချာ စူးစိုက်ကြည့်နေတာ တစ်နေ့ကတွေ့တယ်၊ ဟော အခု အဲ့လူသေပြီလေ… အဲ့တော့ ခများသေမင်း လို့ ထင်မိတာနဲ့ စကားလှမ်းပြောကြည့်တာ… အခုလို ပြန်ပြောတော့ ပိုသေချာသွားတာပေါ့.. သူတစ်ချက်ပြုံးရင်း အနီးနား ဝင်ထိုင်သည်၊ လက်ဖက်ရည် ကျကျလေး တစ်ခွက်ဟေ့.. မင်းက အတော်လာတဲ့ကောင်ပဲ အချို ဆို ငါ့ကိုပတ်ပြေးလို့ အချို့များ ငါမှန်းသိရင်ကို အနားမကပ်ခံကြတော့ဘူး မင်းကျတော့ … Read more
ထောင်ကျဖူးတဲ့အမေ ဖြစ်သွားတာကြောင့် သားဖြစ်သူကို သနားတယ်ဆိုတဲ့ မေသန်းနု
အကယ်ဒမီ မင်းသမီးချောမေသန်းနု ကတော့ပြောင်မြောက်တဲ့ အနုပညာအရည်အချင်းတွေကြောင့် အကယ်ဒမီဆုကြီကို (၅)ထပ်ကွမ်း ရရှိထားတဲ့ မင်းသမီးကြီးတစ် ဦးပါ။ မကြာသေးခင်က ငွေကြေး လိမ်လည်မှု ပုဒ်မ ၄၂၀ နဲ့ အင်းစိန် မှာ ထောင်ဒဏ်တစ်နှစ်ကျခံနေရတာဖြစ်ပြီး ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကပဲ ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့တာပါ။ ေ့ခာက်လခန့်အင်းစိန် အကျဉ်းထောင်မှာ ထောင်ဒဏ်ကျ ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီး အခုလိုပြန်လွတ်မြောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် မေသန်းနုက ထောင်ကျနေစဉ်အတွင်းမှာသူမကြုံတွေ့ရတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေကိုပြောပြလာခဲ့ပါတယ် ” ဟိုထဲမှာ အားလုံးအဆင်ပြေတယ် ကိုယ်လာမယ် ဆိုတာ ကျန်တဲ့သူတွေက ကြိုသိနေတာ အားလုံးကနွေးနွေးထွေးထွေးနဲ့ဆက်ဆံတယ် စိတ်တစ်ခုကတော့ အမြဲကျဆုံး နေတာပေါ့။ သားလေးအတွက် ပိုစိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ် အမေက ထောင်ကျခဲ့ရတော့ သူ့ကို ပိုသနားတယ်” လို့ဆိုလာပါတယ် စင်ရော်မောင်မောင်နဲ့ မေသန်းနု တို့ကလက်ရှိမှာမပေါင်းသင်းကြတော့ပေမယ့်သားလေး မင်းသန့်မောင်မောင် ကို နှစ်ဦးလုံးက အကောင်းဆုံးပံပိုးနေလျက်ရှိပါတယ် သားလေးရဲ့ အနာဂါတ်အတွက် … Read more
ဖုန်းနံပါတ် အလွဲပေးခဲ့ကာ တရုတ်ပြန် အမျိုးသမီးတဦီး Q မဝင်ဘဲ ထွက်ပြေးပြန် တောင်ဒဂုံကနေ ပြန်ခေါ်ခဲ့ရ
ဖုန်းနံပါတ် အလွဲပေးခဲ့ကာ တရုတ်ပြန် အမျိုးသမီး တဦီး Q မဝင်ဘဲ ထွက်ပြေးပြန် ၊ တောင်ဒဂုံကနေ ပြန်ခေါ်ခဲ့ရ ရန် ကုန် ဘူတာကြီး မှ Q Center သို့ပို့ဆောင်ရန် အဆက် အသွယ်ပြတ်တောက် ခဲ့သည့် တရုတ်ပြန် အမျိုး သမီးအား ဒဂုံမြို့သစ် (တောင်ပိုင်း)မြို့နယ် (၂၂) ရပ်ကွက် ရှိ နေအိမ်တွင် ရှာဖွေတွေ့ ရှိ ခဲ့ကြောင်း အဆိုပါမြို့နယ် မှ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးညီညီက ပြော ပါ သည် ။ ဖုန်းနံပါတ် အလွဲပေးခဲ့ကာ တရုတ်ပြန် အမျိုးသမီး တဦီး Q မဝင်ဘဲ ထွက်ပြေးပြန်မနေ့က ဇူလိုင် ၆ ရက်နေ ့တွင် မန္တလေး … Read more
မနက်စာ မစားတာက သင့်ကျန်းမာရေးကို ဘယ်လိုဆိုးရွားစွာ ထိခိုက်စေနိုင်ပါသလဲ?
အိမ်မှာကိုယ်တိုင်Samyang ထမင်းလိပ်နဲ့ နဲ့Samyang Rice Ball လုပ်နည်း
အိမ်မှာကိုယ်တိုင်Samyang ထမင်းလိပ်နဲ့ နဲ့Samyang Rice Ball လုပ်နည်း အိမ်မှာကိုယ်တိုင်Samyang Kimbap နဲ့Samyang Rice Ball လုပ်စားကြမယ် ဟိုတလောကonlineမှာ Samyang Kimbapဟော့ဖြစ်နေကတည်းက စားချင်နေတာ အခုမှပဲလုပ်စားဖြစ်တော့တယ် ပါဝင်ပစ္စည်းများ 1. Sam yan g Spicy Sauce – 8000Ks (ပိုစပ်ချင်ရင် အနီရောင်ဗူး double spicyကို ဝယ်ပါ) 2. mayonnaise – 1700Ks 3. ရေညှိပြား (၁၀ချပ်ပါ) – 2200Ks 4. CP sausage – 2250Ks 5. ရှမ်းဆန်/ကြက်ဥ/မုန်လာဥနီ/သခွားသီး ဒီလောက်ဆို အခုပြောမယ့် ၂မျိုးလုံးလုပ်ဖို့အတွက် အတော်လေး … Read more
← Previous Page1 … Page381 Page382 Page383 … Page392 Next →